काठमाडौं । कोरोना लागेका व्यक्तिलाई छुन त हुन्न नै, कोरोना संक्रमितले छोएको ठाउँ छोएसम्म पनि कोरोना सर्छ भन्छि । तर, स्वास्थ्य अधिकारीहरुले भने माक्स लगाएर यौन सम्पर्क गर्न सकिने अचम्मको तर्क अघि सारेका छन् । अमेरिकाको न्युयोर्कमा कोरोना महामारीको अवधिमा यौन सम्पर्क गर्दा मास्क लगाउनुपर्ने भन्दै...
कसले लाउँछ यति लामो जुत्ता ? कोरोनाबा...
जेष्ठ १९, 2077 काठमाडौं । नेपालसहित संसारका धेरै देशमा अहिले लकडाउन चलिरहेको छ । लकडाउनसँगै संसारभर सामाजिक दूरी पालनामा स्वास्थ्य विज्ञहरुले जोड दिँदै आएका छन् । कोरोना भाइरसको कहरबाट मुक्ति पाउनका लागि विभिन्न उपायको अवलम्वन हुँदै आएको...
यसरी कोरोना टेष्टको स्याम्पल बाँदरले ...
जेष्ठ १७, 2077 काठमाडौं । अहिले विश्व नै कोरोना महामारीको सन्त्रासमा छ । पछिल्लो अवस्थासम्म विश्वमा कोरोनाको कुनै भ्याक्सिन तयार भइसकेको छैन । मात्र टेष्ट गरेर रिपोर्ट पोजेटिभ आयो भने आइसोलेसनमा बस्ने हो । त्यसका लागि पहिले कोरोना टेष्ट ...
कोरोना भाइरस यौन सम्पर्क गर्दा पुरुषक...
जेष्ठ १४, 2077 काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) निको हुन लागेका पुरुषको वीर्यमा भने भाइरस रहिरहनसक्ने नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार यस अध्ययनले यौन सम्पर्कमार्फत पनि कोरोना सर्नसक्ने सम्भावना औंल्याएको छ ...
दर्जनौं मयूरहरु सडकमा नाच्दा सकडै जाम !
जेष्ठ ६, 2077 काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनको सकारात्मक प्रभाव पर्यावरणमा परेको छ । मानिसहरुले जति नै दुःख पाए पनि प्राकृतिक वातावरणमा भने धेरै नै सुधार आएको छ । विगतका वर्षहरुका तुलनामा यसवर्ष वातावरणमा धेरै नै सुधार भएको ...
श्रीमतीले मलाई १० वर्षसम्म बलात्कार ग...
जेष्ठ ६, 2077 काठमाडौँ । सामान्यतः घरेलु हिंसाको पीडित महिलाहरु हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आंकडाअनुसार विश्वका एक तिहाई महिला तथा युवतीहरु आफ्नो जीवनकालमा एक न एकपटक घरेलु तथा यौन हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । पुरुषमाथि हुने घरेलु...
तीन डलर रकम बोकेर जब ५ वर्षे बालक सडक...
बैसाख २४, 2077 एजेन्सी । अमेरिकामा पाँच वर्षका एक बालकले आफैँले गाडी चलाएर अर्को गाडी किन्न निस्किएका छन् । उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । आमासँग रिसाएका यी बालकले आफैँले गाडी चलाएर अर्को नयाँ गाडी किन्नका लागि हिँडेको अवस्थामा प्र...
पुरुषको लिंग १० सेकेन्डमै किन उत्तेजि...
बैसाख २३, 2077 काठमाडौं । यौन सम्पर्कका लागि वयस्क मानिस तयार रहनु कुनै नौलो होइन । किनकी यो प्राकृतिक कुरा पनि हो । यौनसम्पर्क गर्दा कामकाजले सिर्जना गरेको तनाव कम हुनुका साथै टाउकाको पीडा पनि निको हुन्छ । जुन कुरा मानिसले याद गरिरहेका ...
बाघ आफैंँ ट्याक्टरमा चढेर उधुम मच्चाए...
बैसाख २१, 2077 काठमाडौं । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेश पिलिभितमा कोरोना भाइरसको संक्रमणकाबीच एउटा बाघले आतंक मच्चाएको छ । स्थानीय गजरौला थाना क्षेत्रमा पर्ने झण्डै एक दर्जन गाउँले बाघको आतंकबाट हैरान भएका छन् । शुक्रबार फेर...
यो माछा, जसको मुटु नै तीन वटा किन हुन...
बैसाख २०, 2077 काठमाडौं । गहिरो समुद्रमा बस्ने एक रहस्यमयी जीव । समुद्रमा यसलाई हेर्न निक्कै कठिन हुन्छ । त्यसको कारण जुन ठाउँको कलर जस्तो छ यसले आफूलाई त्यहीँ कलरमा ढालिहाल्छ । यो रहस्यमय माछाको शरीरमा तीनवटा मुटु हुन्छन् । यसको रगत हर...
यी युवती, पुरुषलाई आफुतिर तान्ने जोसँ...
बैसाख २०, 2077 काठमाडौं । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार १२ राशि हुने गर्दछन् । यी १२ राशि अनुसार व्यक्तिको स्वभाव, चरित्र पनि फरक हुने गर्दछ । राशि अनुसार भविष्य, स्वभाव, चरित्रलाई सजिलै नियाल्न सक्ने ज्योतिष शास्त्रले बताएको छ । यस्ता कतिपय...
श्रीमतिको योनीमा खुर्सानीको धुलो हाले...
बैसाख १८, 2077 कहिलेकाँकी गल्तीले हातमा खुर्सानीको धुलो लाग्यो भने जलन सहन गाह्रो पर्छ । यस्तोमा तपाइँमा सोच्नुस् त कसैले महिलाको योनीमा खुर्सानीको धुलो हाल्दियो भने कस्तो हुन्छ होला ? यस्तै घटना यतिबेला चर्चामा छ । जहाँ श्रीमानले आफ्नी...
कसले सक्छ ११२ पटकसम्म यौन सम्पर्क गर्...
बैसाख १४, 2077 काठमाडौं । अधिकांस मानिसको मनमा कति पटकसम्म यौन सम्बन्ध राख्न मिल्छ ? धेरै पटक यौन सम्पर्क गरे के कस्तो असर गर्ला ? आदी प्रश्न उठ्ने गर्छ । जुन स्वभाविक पनि हो । यो सामान्यतया सोधिने प्रश्न होईन तर उमेर पुगेका व्यक्तिहरुले...
२२ वर्षीय मोडलसँग नेइमारकी आमाको यस्त...
बैसाख ११, 2077 काठमाडौं । ब्राजिलका फुटबल स्टार नेइमार अहिले उनकी आमाका कारण चर्चामा छन् । नेइमारकी आमा २२ बर्षे युवासँगको अफ्येर्स सार्वजनिक भएपछि अहिले सबै अचम्ममा परेका छन् । ५२ वर्षीय नादिने गोनकाल्भेजले २२ बर्षिय मोडल टियागो रामोसस...
यी मजदुर, जसले भोक पचाउन खाए घाँस (भि...
बैसाख ११, 2077 काठमाडौं । लकडाउनको समयमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भारतको एक भिडियो भाइरल बनेको छ । भिडियोमा एक मजदुरले थालीमा घाँस राखेर खाएको देख्न सकिन्छ । भाइरल भएको यो भिडियो पाँच मिनेटको छ । यस भिडियोमा यी व्यक्तिले कसरी घाँस चबाउँछन...